တရုတ်အကောက်ခွန်သိပ်သည်းဆမြင့်ရော်ဂျာ PCB circuit board ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Fastline
ဦးဆောင် mesh Nebulizer Manaufacturer
နှစ်ချက် Layers Fr4 Pcb ဘုတ်အဖွဲ့ Layout
Multilayer Fr4 Pcb Baord ပရင်တာ
လူပျိုအလွှာ Fr4 Pcb ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ရေဒီယိုလျင်မြန်စွာတင်းကျပ် Flex ကို Pcb
တင်းကျပ်အသေးစား PCB ထည် High Quality ထည် ...
quick တင်းကျပ် Flex ကို Pcb စီးပွားရေး
0.2mm Hole PCB ရောနှောထားသော Compression ကိုတင်းကျပ် -Flexible PCB ...
ရွှေပန်းကန်ရော်ဂျာ PCB ထည်စျေး
ဝါသနာရှင်များအတွက် 0.15mm Hole PCB တင်းကျပ် -Flexible PCB ဘုတ်အဖွဲ့
0.15mm Hole PCB နျ Standard တင်းကျပ်-Flexible PCB ဘုတ်အဖွဲ့
သိပ်သည်းဆမြင့်လျင်မြန်စွာတင်းကျပ် Flex ကို Pcb
0.1mm Hole တင်းကျပ်-Flexible PCB ဘုတ်အဖွဲ့ Gerber ဘုတ်အဖွဲ့
keypad များအတွက် 0.1mm Hole တင်းကျပ် -Flexible PCB ဘုတ်အဖွဲ့
OEM Professional ကသိပ်သည်းဆမြင့်ရော်ဂျာ PCB
custom သိပ်သည်းဆမြင့်ရော်ဂျာ PCB circuit board
ဗဓေလသစ် Plug Hole ရော်ဂျာနှစ်ချက်ဘက် Pcb circuit board
အီလက်ထရောနစ်စာနယ်ဇင်း Hole ရော်ဂျာ PCB
ရော်ဂျာ 4003 PCBLayers: 2L ထူ: 0.4mm ပစ္စည်း: ရော်ဂျာ 4003 အောင်မင်းလမ်းကြောင်းအကျယ်: 0.12mm အောင်မင်းလမ်းကြောင်းအာကာသ: 0.15mm အောင်မင်းအပေါက်: 0.2mm Cu: 1OZ / 1 oz Soldermask: အစိမ်းရောင် Silkscreen: အဘယ်သူမျှမ က Surface finish ကို: ENIG ကျနော်တို့ထက်ပိုမို 10 နှစ် PCB နှင့် PCBA စက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်နှင့်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အမှုဆောင်နေကြတယ် အဖြစ်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်အမေရိကနှင့်အရှေ့တောင်အာရှစျေးကွက်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ကူညီဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Min.Order အရေအတွက်: 1 Piece/Pieces
ကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်ပို့ပါ PDF ဖိုင်အဖြစ် Download
custom သိပ်သည်းဆမြင့် ရော်ဂျာ PCBcircuit board
၏ 1.Introduction custom သိပ်သည်းဆမြင့်ရော်ဂျာ PCB circuit board
Fastline Circuits အပြည့်အဝ turnkey နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း turnkey ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ပရိသန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်စွမ်းသည်။ အပြည့်အဝ turnkey, ကြှနျုပျတို့ Printed circuit board ၏ပြင်ဆင်မှု, အစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူရေး, အွန်လိုင်းအလို့ငှာခြေရာခံခြင်း, အရည်အသွေးနှင့်နောက်ဆုံးစုရုံးစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏စောင့်ရှောက်မှုယူပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း turnkey များအတွက်သွားရမည်အကြောင်း, ထိုဖောက်သည် PCBs နှင့်အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးနိုင်ပါသည်, နှင့်ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။
PCB အတွက် 1. 10 ကျော်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုထုတ်လုပ်သူစည်းဝေး PCB ကိုလယ်။
သီး 2. Big စကေးသင်၏ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်နိမ့်ကြောင်းသေချာစေသည်။
4. သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်နီးပါးဆို PCB ထုတ်လုပ်။
အားလုံးစိတ်ကြိုက် PCB ထုတ်ကုန်များအတွက် 5. 100% စမ်းသပ်။
6. တစ်ခုမှာ-stop Service ကိုကျနော်တို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ယူရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
PCB ရှေ့ပြေးပုံစံအချိန် Lead:
မှတ်ချက်: ကိုပြည့်စုံနှင့်ပြဿနာအခမဲ့ဖြစ်ရမည်အားဖြင့်လက်ခံရရှိဒေတာအားလုံးအပေါ်အခြေစိုက်စခန်း, ခဲအချိန်တင်ပို့ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
အသံအရည်အသွေး Fastline အဘို့အကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းရရှိမညျဖွစျသညျ။ သစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်အဖန်ဖန်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပူးပေါင်းခဲ့ပြီးအသစ်ဖောက်သည်သူတို့ကြီးစွာသောဂုဏ်သတင်းကိုကြားသည့်အခါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ထောင်ရန် Fastline ထံသို့လာကြ၏။ ငါတို့သည်သင်တို့မှအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့မျှော်လင့်!
စိတ်တိုင်းကျသိပ်သည်းဆမြင့်ရော်ဂျာ PCB circuit board ၏ 2.Production အသေးစိတ်
3. ဏလျှောက်လွှာ ,fcustom သိပ်သည်းဆမြင့်ရော်ဂျာ PCB circuit board
ကျနော်တို့စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ထံမှတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအသစ်စွမ်းအင်, အာကာသ, မော်တော်ကား, etc ရန်, မြောက်မြားစွာနိုင်ငံများသို့အရည်အသွေးမြင့် PCBA တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြ
4. အရည်အချင်း custom သိပ်သည်းဆမြင့်ရော်ဂျာ PCB circuit board
ကျနော်တို့သီးသန့်ထုတ်လုပ်မှုစီမံသင့်ရဲ့ pcb ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စည်းဝေးပွဲကိုလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, သင့်ငွေပေးချေမှုပြီးနောက်သင့်ရဲ့အမိန့်ထုတ်လုပ်မှုကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်သီးခြားဌာနခန့်ထားပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pcba သက်သေပြဖို့အရည်အချင်းများကိုအောက်တွင်ရှိသည်။
ကိုသင်မဆိုအမြန်သင်သည်သင်၏အကောင့်နှင့်အတူရှိသည်သောကုမ္ပဏီ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ, လေးလံအထုပ်အဘို့, Seaways သင်္ဘောလည်းမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင် pcba ရသည့်အခါ, စစျဆေးနှင့်သူတို့စမ်းသပ်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ
A1: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု & ညီလာခံစက်ရုံရှိသည်။
A2: ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများပေါ်တွင်အခြေခံတူညီမဟုတ်ပါဘူး။ အသေးစားအမိန့်ကိုလည်းကြိုဆိုကြသည်။
A3: PCB: Gerber file ကို သာ. ကောင်း၏, (Protel, ပါဝါ pcb, pads ဖိုင်), PCBA: Gerber ဖိုင်နှင့် BOM စာရင်းဖြစ်သည်။
Q4: အဘယ်သူမျှမ PCB ဖိုင် / GBR ဖိုင်သာ PCB နမူနာရှိသည်, သငျသညျအကြှနျုပျအဘို့ကထုတ်လုပ်နိုင်သလဲ
A4: ဟုတ်ကဲ့, ကျနော်တို့ PCB clone မှသင့်ကိုကူညီနိုင်ဘူး။ ရုံကျွန်ုပ်တို့သည် PCB ဒီဇိုင်းကို clone ကထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ကိုနမူနာ PCB ပေးပို့ပါ။
Q5: အဘယ်အရာကိုမဆိုအခြားသတင်းအချက်အလက်ဖိုင် မှလွဲ. ပူဇော်ရသင့်သလဲ
A5: ပြီးနောက်သတ်မှတ်ချက်များ quotation အဘို့လိုအပ်နေပါသည်:
က c) ကြေးနီထူ
ဃ) က Surface ကုသမှု:
ဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံးနှင့် silkscreen ၏င) အရောင်
, f) ပမာဏ
Q6: ငါသည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်အရမ်းကျေနပ်မိပါတယ်, ဘယ်လိုငါသည်ငါ၏အမိန့်ကိုဝယ်ယူရန်စတင်နိုင်မလဲ?
A6:, အွန်လိုင်းပင်မစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြု. !
A7: ကျနော်တို့များသောအားဖြင့် FOB အသုံးအနှုန်းများကိုသုံးပါနှင့်သင့်အလို့ငှာအရေအတွက်, စိတ်ကြိုက်ပေါ် မူတည်. 7-15 လုပ်အားခအတွက်ကုန်စည်တင်ပို့ရန်။
Fr4 ရော်ဂျာ PCB
Multilayer ရော်ဂျာ PCB
စာနယ်ဇင်း Hole ရော်ဂျာ PCB
တင်းကျပ် PCB 0.1mm
တင်းကျပ် PCB 0.2mm
ရော်ဂျာ 4003 PCB
ရော်ဂျာ 4003c PCB
ရော်ဂျာ 4350 Malzeme PCB
ရော်ဂျာ 4350 ပစ္စည်း PCB
ရော်ဂျာ 4350 PCB
ရော်ဂျာ 5880 PCB
ရော်ဂျာကြွေ PCB ဘုတ်အဖွဲ့
ရော်ဂျာ PCB ဘုတ်အဖွဲ့
ရော်ဂျာ PCB လုပ်ခြင်း
ရော်ဂျာ Ro4003c PCB
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းစာနယ်ဇင်း Hole ရော်ဂျာ PCB
ရိုးရှင်းသောရော်ဂျာ Pcb circuit board ကို Reverse Engine ကို ...
Circuits Corp ကပုံနှိပ်ရွှေပန်းကန်ရော်ဂျာ PCB
သိပ်သည်းဆမြင့်အွန်လိုင်းရော်ဂျာ Pcb circuit board
ဖုန်းများ: +86 755 2332 9221
နေရပ်လိပ်စာ: 509 ZhongYang အဆောက်အအုံ, No.24 FuHai လမ်း, FuYong, Bao တစ်ခု, ရှန်ကျန်း, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ် 518103
© Copyright - 2010-2017 : All Rights Reserved. အသားပေးထုတ်ကုန်များ,မြေပုံအညွှန်း ,မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
ရော်ဂျာ PCB, တင်းကျပ်-Flexible PCB, တင်းကျပ် Flex ကို PCB, တင်းကျပ်-Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့, Customized Rigid-Flex PCB, Fr4 Flex ကို PCB,